Izindaba - Umgomo wesokhethi engangeni manzi: ungayifaka kanjani isokhethi engenawo amanzi
Isimiso sesokhethi engangeni manzi: ungayifaka kanjani isokhethi engangeni manzi
Isokhethi elingenamanzi yipulagi elinokusebenza okungangenwa manzi, futhi linganikeza ukuxhumana okuphephile nokwethembekile kukagesi, isiginali, njll. Isibonelo: Isibani semigwaqo ye-LED, ukunikezwa kwamandla okushayela i-LED, isikrini sokubonisa i-LED, i-lighthouse, umkhumbi we-cruise, imishini yezimboni, imishini yokuxhumana, imishini yokuthola, isikwele sezohwebo, umgwaqo, udonga lwangaphandle lwe-villa, ingadi, ipaki, njll., konke kudingeka kusetshenziswe isokhethi elingangeni manzi. Uyawazi umgomo wesokhethi engangeni manzi? Uyazi ukuthi ungafaka kanjani isokhethi engangeni manzi?
Isingeniso esokeni elingenamanzi
Isokhethi elingangeni manzi aliyona nje ipulagi elinokusebenza okungangenwa ngamanzi, kodwa futhi lixhumano oluphephile nolunokwethenjelwa lukagesi, isiginali, njll. Isibonelo: Isibani somgwaqo se-LED, ukunikezwa kwamandla kagesi okushayela, isibuko sokubonisa i-LED, i-lighthouse, umkhumbi we-cruise, imishini yezimboni, ukuxhumana imishini, imishini yokuthola, isikwele sezohwebo, umgwaqo, udonga lwangaphandle lwe-villa, ingadi, ipaki, njll., konke kudingeka kusetshenziswe isokhethi elingangeni manzi.
Kunezinhlobo eziningi nezinhlobo zesokhethi elingangeni manzi emakethe, kufaka phakathi isokhethi yendabuko engenamanzi esetshenziswa empilweni yasekhaya, efana ne-triangle plug, engabizwa ngokuthi yisokhethi, kepha ngokuvamile ayinamanzi. Ngemuva kwalokho ungahlulela kanjani isokhethi elingangeni manzi? Isilinganiso esingenamanzi yi-IP. Izinga eliphakeme lokungenwa kwamanzi yi-IP68. Okwamanje, kunabakhiqizi abaningi basekhaya be-plug engenamanzi, kepha bambalwa abakhiqizi bezisekelo zezimboni nezasekhaya, ngakho-ke akulula ukusebenzisa ipulagi yomshini jikelele.
Isokhethi lasekhaya elingangenwa manzi, i-220v10a ipulagi ezintathu kanye ne-plug ezimbili kungasetshenziswa endaweni engavikeleki ukuhlangabezana nezidingo zokusetshenziswa kwasekhaya. (izinga lokuvikelwa i-IP66 lingahlangabezana nezidingo zomndeni. I-IP66 isifutho samanzi esinamandla kuzo zonke izinhlangothi, futhi ayingeni emanzini ngemuva kokucwilisa imitha elilodwa lamanzi ngehora eli-1). Kumele kuqashelwe ukuthi isokhethi langaphandle livame ukwenziwa nge-PC, ngakho-ke ukulwa nokuguga kufanele kubhekwe.
Isimiso sesokhethi engangeni manzi
Isokhethi elingangeni manzi ukufaka ibhokisi elingangeni manzi elinekhava ngaphandle kwesokhethi sodonga oluhlanganisiwe jikelele. Indawo lapho ibhokisi lixhumana khona nodonga linomata wenjoloba, ngakho-ke lingangeni manzi; ezinye izikhoxe ezingangenwa manzi zingumgodi wobufakazi bemvula epulasitiki, umgodi wokusika ophakathi ubheke phansi futhi usekela ikhanda elikhethekile lokusika. Kunezintambo ezine zesigaba sesithathu, izintambo ezintathu ezixhasa izintambo ezisikiwe.
Ukufakwa kwesokhethi engangeni manzi
Okokuqala susa isokhethi, bese ufaka ikhava engangeni manzi ngemuva kwesokhethi, bese uxhuma bese ulungisa ucingo kusixhumi esibonakalayo sesokhethi ngokuya kwe-polarity (ucingo olubukhoma luxhunywe kusixhumi se-L, ucingo lwe-zero luxhunywe ku-N interface, futhi ucingo lomhlabathi luxhunywe ku-e interface). Isikulufu sokubopha kufanele siqiniswe, futhi kungcono ukubeka isikulufa sokulungisa isokhethi odongeni.
Ukufakwa kwesokhethi elingangeni manzi ethoyilethi
Indlu yangasese iyindawo enomswakama kakhulu ekhaya, futhi isokhethi kulula ukufafaza amanzi, ngakho-ke ukukhethwa nokufakwa kwesokhethi endlini yangasese kufanele kunake kakhulu:
1. Lapho ufaka isokhethi endlini yangasese, yifake phezulu ngangokunokwenzeka, kude nombhobho wamanzi noma idivaysi ephuma namanzi.
2. Isokhethi elisendlini yangasese kufanele livikelwe ngesembozo esivikelayo, bese kukhethwa iswishi enefilimu yokuvikela epulasitiki.
3. Lapho uthenga isokhethi, hlola ukuthi isiqeshana sesokhethi siqinile ngokwanele yini, amandla okufaka kufanele anele, nesiqeshana sesokhethi kufanele sibe nobulukhuni. Kulezi zinsuku, ukwakheka kwesiqeshana esisekelweni kwamukela indlela eqinile ye-extrusion, ekhulisa kakhulu amandla okuluma phakathi kwepulagi nesiqeshana, igwema isimo sokushisa ngesikhathi sokusebenzisa isikhathi eside, ngasikhathi sinye, i-extrusion enamandla yenza ipulagi ingabi kulula ukuwa, futhi kwehlisa ngempumelelo isimo sokwehluleka kwamandla okubangelwa yizici zabantu.
4. Ngenqubo yokusebenzisa, qiniseka ukuthi isandla somile, ungalethi amanzi ukusebenzisa iswishi nesokhethi.
5.Lawula ngokuqinile ikhwalithi yamaswishi nezisekelo, futhi imikhiqizo ethengwe yodwa ayifanelekile. Noma abantu bewusebenzisa ngokuphepha ugesi, kunezingozi ezicashile zokuvuza.
Ukufakwa kwesokhethi yangaphandle engangeni manzi
Ukuze kube lula ukukhanyisa ekhaya, abantu abaningi futhi bafaka amasokhethi ngaphandle, njengebhalkoni, igceke lePavilion nezinye izindawo. Ngenxa yemvula nezinye izizathu ezingaphandle, kufanele kunakwe kakhulu ukukhethwa nokusetshenziswa kwezisekelo:
1. Isokhethi lizofakwa endaweni ecashile lapho amanzi emvula angenakuthululwa khona.
2. Kufanele sikhethe isokhethi lomkhiqizo elikhulu elingangeni manzi ngekhwalithi enhle. Uma ikhwalithi yesokhethi engangeni manzi ingalungile, kuzoba nengozi enkulu engaba khona yokuphepha lapho isetshenziswa esimweni sezulu somswakama ongaphandle.
3. Zama ukucisha ugesi ongaphandle ngezinsuku zemvula ukugwema ezinye izingozi, futhi uzame ukungasondeli kule ndawo nogesi.
4. Isokhethi yangaphandle ibandakanya ukungenwa ngamanzi, ukungangeni uthuli, ukulwa nokuguga, njll. Ngakho-ke kufanele kusetshenziswe isokhethi elingenawo amanzi.
5. Izinga lokuvikela ipulagi nesokhethi langaphandle liphakeme kakhulu, futhi kunconywa ukuthi ukhethe i-IP55 noma ngaphezulu.